ကြောက်ရွံ့နေတာတွေ ကို သက်သာစေမယ့် အစားအသောက်များ - Hello Sayarwon
ကြောက်ရွံ့နေတာတွေ ကို သက်သာစေဖို့ အစားအသောက်တွေကလည်း အရေးကြီးတဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ပါနေပါတယ်။
ကြောက်တယ်၊ စိုးထိတ်တယ်၊ ထိတ်လန့်တယ်ဆိုတာက လူတိုင်းနီးပါး ဖြစ်ဖူးမယ့် စိတ် အခြေအနေပါ။ ဒီစိတ်အခြေအနေက ဖြစ်ရပ်တွေ၊ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခြေအနေတွေကနေ အရင်းခံလာတာပါ။ လူတိုင်းမှာ ကြောက်ရွံ့မှုကို ဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေက မတူကြပါဘူး။
တစ်ခါတလေမှာ ကြောက်ရွံ့မှုတွေက ရက်ပိုင်းအတွင်း သက်သာသွားနိုင်ပေမယ့် တစ်ခါတလေမှာတော့ ၆ လလောက်အထိ ကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒီ ကြောက်ရွံ့မှုတွေကို သက်သာစေဖို့ ဘာတွေ စားပေးသင့်လဲဆိုတာကို ဆောင်းပါးလေးထဲမှာ ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
နေ့စဉ် ကြုံတွေ့နေရတဲ့ ကိစ္စတွေကိုတောင် ကြောက်လန့်သလို ခံစားနေရမယ်
ရင်ဘတ်ထဲက တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ အောင့်မယ်စတဲ့ လက္ခဏာတွေ ခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ကြောက်ရွံ့နေတာတွေ ကို သက်သာစေဖို့ ဘာတွေ စားရမလဲ…….
ကြောက်ရွံ့မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်ခံစားလာရပြီဆိုရင် သက်သာစေဖို့ ဒါလေးတွေ စားပေးလို့ ရပါတယ်။
အဆီပါဝင်မှု များတဲ့ ပင်လယ်ငါးတွေ ဖြစ်ကြတဲ့ ဆယ်လ်မွန်ငါး၊ တူနာငါး၊ ဆာဒင်းငါး၊ ထရောက်ငါး၊ မက်ကာရယ်ငါး စတဲ့ငါးတွေက Omega-3 fatty acid ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပြီး စိတ်ကျန်းမာရေးကို အထိရောက်ဆုံး ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကြောက်စိတ်တွေ များလို့ စိတ်ထဲ နေရထိုင်ရ အဆင်မပြေတဲ့အခါ ဒီလို အဆီများတဲ့ ငါးတွေကို စားပေးသင့်ပါတယ်။ ဆယ်လ်မွန်ငါးနဲ့ ဆာဒင်းငါးတွေမှာဆိုရင် စိတ်ကျန်းမာစေမယ့် ဗီတာမင် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ဗီတာမင် D ပါ ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥ။ ငုံးဥ စတဲ့ ဥတွေရဲ့ အနှစ်တေါမှာ စိတ်ကျန်းမာရေးကို ထောက်ကူပေးတဲ့ ဗီတာမင် D ပြည့်ဝစွာ ပါဝင်နေပါတယ်။ ဥအမျိုးမျိုးမှာ ပရိုတင်းဓာတ် ကြွယ်ဝသလို စိတ်ခံစားမှုကို အကောင်းဆုံး ထိန်းညှိပေးတဲ့ ဆီရိုတိုနင် ထွက်ရှိအောင် လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ် တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ tryptophan လည်း ပါဝင်ပါတယ်။
ဖရုံစေံမှာ ပိုတက်ဆီယမ် ပါဝင်တာကြောင့် သွေးပေါင်ချိန်ကို ထိန်းပေးပြီး ကြောက်စိတ်ကြောင့် ဖြစ်လာမယ့် သွေးတိုးတာကို ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ ဇင့် ပါဝင်နေမှုကလည်း စိတ်ခံစားမှုကို ကောင်းစေပြီး စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေကို ပြေလျော့စေဖို့ အထိရောက်ဆုံး ထောက်ကူပေးနိုင်မှာပါ။
အနက်ရောင် ချောကလက်က စိတ်အတွက် အစာတစ်မျိုးပါ။ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးပါတယ်။ ဖလေဗာနွိုက် ပါဝင်နေမှုက ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေဆီ သွေးစီးဆင်းရောက်ရှိမှု ကောင်းစေပြီး ကြောက်ရွံ့မှုကို လျော့ပါး သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
နနွင်းက ဟင်းခတ်တစ်မျိုးဆိုပေမယ့် ဆေးဖက်လည်း ဝင်ပါတယ်။ နနွင်းမှာပါတဲ့ curcumin က ဓာတ်တိုးပစ္စည်းတွေကြောင့် ထိခိုက်မှု မဖြစ်စေဖို့ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ စိတ်ပူပန်မှုကို လျော့ကျစေသလို ကြောက်စိတ် ဖြစ်ပေါ်မှုကိုလည်း လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။ ​နေ့စဉ် စားသုံးမှုမှာ နနွင်း ထည့်စားတာက စိတ်ကျန်းမာစေဖို့ အကောင်းဆုံး ထောက်ကူပေးနိုင်မှာပါ။
ဒိန်ချဉ်က အကျိုးပြုဘက်တီးရီးယားလေးတွေ ပါဝင်နေတဲ့ အစားအစာ တစ်မျိုးပါ။ အစာခြေစန်စကို ကျန်းမာစေသလို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာစေဖို့လည်း အကောင်းဆုံး ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
စိတ်ဖိစီးတာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျတာ၊ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်တာ၊ စိတ်ပူပန်တာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
လက်ဖက်စိမ်း ရေနွေးကြမ်းမှာ theanine လို့ ခေါ်တဲ့ အမိုင်နိုအက်ဆစ် တစ်မျိုးပါဝင် နေတာကြောင့် စိတ်ခံစားှုတွေကို ကောင်ဒမွန်စေပြီး စိတ်ပူပန်တာ၊ စိုးရိမ်ထိတ်လန့်တာတွေကို သက်သာစေနိုင်ပါတယ်။
တစ်နေ့ကို လက်ဖက်စိမ်း ရေနွေးကြမ်း တစ်ခွက် ပုံမှန် သောက်သုံးမှုက ကြောက်စိတ်တွေကို ပြေလျော့စေမှာပါ။
ကပ်ဘေးကြောင့် စိုးရိမ် ထိတ်လန့်မှုတွေ၊ ကြောက်စိတ်တွေကြောင့် အိပ်ရေးပျက်ပြီး စားချင်သောက်ချင်စိတ် ပျောက်လို့ အချိန်တိုင်းမှာ ကြောက်စိတ်တွေ များနေတယ်ဆိုရင် ဒီ အစားအစာလေးတွေကို နေ့စဉ် စားသုံးမှုမှာ ထည့်သွင်း စားသုံးပေးဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
What are some foods to ease your anxiety? https://www.medicalnewstoday.com/articles/322652 Accessed Date 16 February 2021
9 Simple Snacks and Meals to Ease Anxiety https://greatist.com/eat/best-foods-for-anxiety#triggering-foods Accessed Date 16 February 2021
8 Foods that Help with Anxiety and Stress https://www.psycom.net/foods-that-help-with-anxiety-and-stress/ Accessed Date 16 February 2021